कहाँ छैन लैंगीक विभेद ? – News Portal
December 2, 2019 epradeshLeaveaComment on कहाँ छैन लैंगीक विभेद ?
आम छोरीहरूको विहे ! रोजेको, खोजेको र खोजिदिएको कोही केटासँगको सहयात्रा मात्र होइन रहेछ बरू कोही छोराको विहे चाहीँ रोजेको र खोजेको र खोजिदिएको कोही केटीसँगको सहयात्रा नै रहेछ । मेरो विहे वा सम्पूर्ण छोरीहरूको विहे त बर्षाैदेखि हुर्किएको झाङ्गिएको र मगमगाएको प्रेमको बर्खिलाप गर्नुपर्ने कठोर यात्रा रहेछ ।
आफ्नो ज्ञानको पहिलो पाठशाला आमाबुवा, साथीभाइसँगको सम्बन्धबाट लगभग अलगाव हुनु पो विहे रहेछ । आफ्ना भएभरका सम्पूर्ण यादहरू, अनुभूतिहरू प्रेमहरू जमेर बसेको घर चटक्क छोड्नुलाई छोरीहरूको विहे, भनिदोरहेछ ।
म सम्झिन्छु आमाले सानैमा भनेको अझ हात समाएर सिकाएको । छोरी भएर जन्मेपछि घरको सबै काम सिक्नुपर्छ र पराइ घरमा गएपछि सजिलो हुन्छ । जस्तो कि भाडा माझ्न, बत्ती काट्न, टपरी गाँस्न आदि इत्यादि । त्यतिबेला मेरी आमालाई मैले प्रश्न गर्थे आमा यो काम त मैले सिक्न सक्छु ? सिक्नुपर्छ पनि तर यही काम मेरा दाइ र भाइहरूलाई किन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्न ?
उहाँहरूलाई सजिलो हुँदैन ? आमा भन्नुहुन्थ्यो यो काम छोरीले नै गर्नुपर्छ । मेरी बज्यै र आमाले सिकाएको काम कुराहरू र छोराछोरीप्रति गर्ने विभेद अहिले पनि देखिरहेछु मैले मेरो समाजमा । छोरी विहे गरेर गएपछि पूरै गृहस्थीको जीवन निर्वाह गर्नुपर्छ यो मानसिकताबाट कोही पर छैन अझैपनि ।
कति सजिलै तयार हुने रहेछन् हरेक छोरीहरू माइतीघर छोड्न ? मनोविज्ञान कति सजिलै बनाउँदा होलान् उनीहरू ? ती छोरीहरूको ठाउँमा छोराहरू हुँदा हुन जन्म घर छोड्नुपर्ने अवस्थामा भने, छोराहरू यति सजिलै मान्दा हुन यो प्रक्रियालाई ?
आम छोरीहरू कसरी छोड्छन घर ? आमा–बुवा ? ‘विवाह’ भन्ने संस्था जन्मदा स्थिति के थियो होला ? नाम पनि थाहा नपाएको, देख्दा पनि नदेखेको, उमेरसमेत थाहा नभएको अपरिचित केटासँग जीवनको बाँकी जम्मै भाग बाँचौला भनेर जन्मघर, बुवा–आमा, दाजुभाइ, साथीसङ्गी र सम्बन्धहरू चटक्कै भुल्न सक्ने सम्बन्ध के थियो होला, जो हालसम्म कायम छ ?
भागी विवाहको अवस्थामा उत्पन्न पुरूष मनोविज्ञान केही फरक हुनसक्छ तर आफ्नो थर र गोत्रसमेत त्यागेर अर्कोमा पूर्ण लिन हुन तम्तयार बन्नसक्ने के ले बनाउँदो हो छोरीहरूलाई ?
पौराणिक पात्रहरू झुल्किए मानसपटलमा । सीताले मिथिला छोडिन र अयोध्या गइन् । रूक्मिणीले कृष्णलाई सर्वश्व मानिन । गोमाले शिव शर्मालाई सहजै स्विकार गरिन । यी पात्रहरू पनि महिलालाई अधिनस्थ गर्न सिर्जित संस्था ‘विवाह’ को सिकार भएका हुन् ।
यिनीहरू खुशीसाथ विहे गर्न तयार भएको कथा पनि पुरूषकै हातको लिखित त हो । पुरूष कै दिमागको उपज त हो । कसले सोधेको थियो र गोमालाई खुशी छाँै कि छैनौँ ? कसले सोधेको थियो र सतिदेवीलाई त्यो जोगी तिम्रो लागि लायक छ कि छैन ?
हजारौं बर्षअघि ‘हामी’ घर छोड्ने जात हौँ भन्ने पढाउन, सिकाउन र सोहीअनुरूप यो सभ्यताले र समाजले जे–जे ग¥यो त्यसको सफलता यहाँ देखियो । महिलाको आफ्नो रहर हुन्न भन्ने धारणालाई ज्ञानका रूपमा वितरण गरियो र छोरीहरू यसमै विश्वस्त भए ।
पुरूष सत्ता जोगियो । विवाह ‘वैधानिक वेश्यावृत्ति’ हो भन्ने पुरूषहरू पनि छन् हाम्रो समाजमा । जो महिलाप्रति आफूले सक्ने हदसम्म उदार हुन्छन् । सबै महिलाहरूको सहयात्रा यस्ता पुरूषहरूसँग हुन सक्दैन । नोकर वा दासको अर्को नाम श्रीमती हो भन्ने मान्यताको रथ चढेर विवाहको मूलबाटो कुद्नेहरूको वर्चश्व रहेको समाजमा विवाह बडो कठोर यातना बनिदिन्छ छोरीहरूका लागि ।
विवाह पछाडिको मेरो रूप र आवरण देखेपछि प्रश्नहरू बर्सिन थाले मेरो शीरमाथि । विवाह गरेको मान्छेको न सिउँदोमा सिन्दुर छ, न हातमा चुरा छन्, न गलामा एकसर्को पोते छ, यस्तो पनि विहे हुन्छ ? सामाजिक मूल्य मान्यता भन्ने केही हुँदैन ? आफ्नो परम्परा, रितिरिवाज मान्नुपर्दैन ? छोरी भएर विवाह भैसकेपछि छोरीकै स्थानमा रहनुपर्दैन ?
मलाई आफ्नो परम्परा, रीतिरिवाजप्रति कुनै आपत्ति छैन । आपत्ति छ त हामी छोरी, महिलाहरू किन बर्षौदेखि त्यही दासताको घुम्टो ओढेर सजिन चाहन्छौं ? हामीलाई किन पुरूषहरूले उही गहनाको तराजुमा तौलिन चाहन्छन् ? या हामी आफैं तौलिन राजी हुन्छौं ? के यी वस्तुहरू भन्दा पर रहेर हामी हिड्न सक्दैनौं ? के हामी यी वस्तुहरूमा नसजिदा हाम्रो अस्तित्व नै रहदैन ?
घरपरिवार र समाजमा बत्तीस लक्षणले भरिपूर्ण देखिने बहानामा हाम्री आमा र बज्यैहरूले बर्षौदेखि ओढ्दै आउनुभएको पितृसत्तात्मक सत्ताको संस्कारिक घुम्टो किन आज पनि हामीले ओढ्नु पर्ने ? बाहिर नराम्रो कहलिने डरले घरभित्र हिंसा सहेर किन बस्नुपर्ने ?
यदि यी सबै गर्नुपर्छ सहनुपर्छ भने लैंगीक विभेद, हिंसाविरूद्ध १६ दिने अभियानको ब्यानर बोकेर प्रत्येक बर्ष सडकमा देखिरहनु, सेल्फी फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा झुन्ड्याईरहनुको अर्थ र अस्तित्व के र के का लागि ? अनि कहाँ छैन लैंगीक विभेद ? मलाई यी यस्तै यावत प्रश्हरूले घोचिरहन्छन् बेला–बेलामा ।
र, म मेरै आमा, दिदी, भाउजूहरूसँग एक्लै विरोध गर्छु । उहाँहरू मलाई गिज्याउँनु हुन्छ । अनि म विरोध गरिरहन्छु । हामीले हाम्रो घुम्टो, गरगहना, चुरापोते र सिन्दुरमा हैन, विगतदेखि कैद हुँदै आएको स्वतन्त्रता र समानतामा आफ्नो अस्तित्व खोज्नुपर्छ र यसको उपभोग गर्न पनि जान्नुपर्छ । मलाई थाहा छ, हामी सामाजिक प्राणी हौं ।
मान्छे भई जन्मेपछि समाजभन्दा पर रहेर बाँच्न हामी सक्दैनौं र बाँच्ने कल्पना पनि गर्दैनौं । हामी हिँडेको बाटो, हामी बाँचेको समाज र परिवेश हाम्रा लागि सबैभन्दा प्रिय हो । त्यही प्रिय रहेको मेरो जन्मघर र म विहे गरेर गईसकेपछिको मेरो घर मेरा लागि मन्दिर हो र मेरा बाआमा, दाजुभाइ, दिदीहरू, मेरा आफन्तहरू नै मेरा भगवान् हुन् । अनि गहना भनेकै मेरो जीवनसाथी हो । जीवनसाथीभन्दा माथि मेरा लागि गहना हुन सक्छ र ?
त्यस्तै गरेर विवाह स्वतन्त्रताको विप्रयास यात्रा गर्छ भन्ने थाहा थियो पहिल्यै । नेपाली हिन्दू समाजमा ‘विवाह’ शब्दले जे अर्थ परिवहन गर्छ, त्यो स्वतन्त्रताको लागि सहायक त हुनै सक्दैन । अन्य भूगोल र धर्ममा प्रयुक्त विवाह स्वतन्त्रताको पर्याय हुन्छ भन्न खोजिएको होइन, बरू तिनको ज्ञान मलाई छैन । आफैं जीवनसाथी रोज्न सक्ने स्वतन्त्रता प्राप्त छोरीहरूसमेत त्यतिखेर जिल्ल पर्छन् ।
जब रोजाई प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्छ समाजले । जात मिलाउनुपर्छ । धर्म फरक पर्नुभएन । हैसियत विचार गर्नैपर्ने हुन्छ । अब यी सब मिल्ने गरी जीवनसाथी छान्नुलाई फेरि स्वतन्त्र भन्न कसरी मिल्छ ? तपाईंहरू आफै भन्नुहोस् ?
विवाहको प्रक्रियाको छनोट पनि स्वतन्त्रता सङ्कुचनको अर्को विन्दु हो । दाइजोयुक्त या मुक्त ? कर्मकाण्डयुक्त या मुक्त ? गरगहनायुक्त या मुक्त ? भोजभतेरयुक्त या मुक्त ? प्रक्रियागत यी सवालहरू सहयात्रा शुरू गर्दै गरेका केटा र केटीको निर्णयले फैसला हुनुपर्ने हो । तर, सामाजिक कानुन, मूल्य मान्यता या यस्तै अरू के–के विषयले हस्तक्षेपको बिगुल फुक्छ ।
निश्चित जात, धर्म र वर्गका लागि आ–आफ्नै प्रकारको विवाहको नियम बनाइएको छ शास्त्र र धर्मको दुहाइ दिएर । त्यसभन्दा बाहिर निस्कन खोज्नु सामाजिक नियम तोड्नु हो भनिन्छ । सामाजिक नियम तोड्नु भनेको असामाजिक बन्नु हो । मान्छे सामाजिक प्राणी भएकाले असामाजिक त बन्नै मिलेन । तर, ज्ञानको प्रवाहले जब सामाजिक हुनुलाई ‘दास’ हुनु हो भन्ने पहिल्याउँछ, त्यसपछि असामाजिक बन्ने प्रयत्न त शुरू भैहाल्छ ।
महिलालाई दूर्गा र काली, चण्डी र महाकालीका नाममा पूजा गरिने समाजमा महिलाको हालत कस्तो छ भनी हेर्दा मात्र पनि आङ सिरिङ्ग हुन्छ । अनि अझ चुरा, पोते र गहनामार्फत महिलालाई आफ्नो बन्धकी माल बनाउन रचित विधानअन्तर्गत बसेर कसरी सहअस्तित्व कायम रहन्छ र ?
पुरूषले महिलालाई सिन्दुर हालिदिएर, पोते लगाइदिएर आफ्नो स्वामित्व दाबी गरिरहदा महिलाले पनि कुनै आभूषण या अन्य कुनै प्रक्रियामार्फत पुरूषमाथि आफ्नो स्वामित्व दाबी गर्न नमिल्ने चाहीँ किन ? जुन आभूषण, महिलाको गहना, सिन्दुर पोतेझैँ, पुरूषले पनि कहिल्यै छोड्न नमिलोस् र महिलाको मृत्युपछि नछोडी सुख नपाओस् ।
कुनै बेला सौन्दर्यका लागि अलि कम र आफ्नो वैभव प्रदर्शन गर्न अलि बढी प्रयोग हुने गरेको गरगहना र आभूषण बढ्दो उपभोक्तावादी संस्कृतिसँगै झनै विकराल बन्दै छ । विवाह भन्ने संस्था नै यति महङ्गो हुँदैछ कि गरिबहरूको पहुँचबाट यो फुत्कने सुरसार कस्दैछ । पुँजीवादको मूल एउटा काम छ– हरेक वस्तु र मान्छेलाई माल बनाउने । मूल्यसूचि टाँस्ने र बिक्री गर्ने ।
गरगहना शृङ्गारका हजार आइटम सिर्जना गर्दै महिलालाई धमाधम माल बनाउँदै छ र आफ्नो ब्यापार गर्दैछ । हामी महिलाहरू छौँ, जो प्राकृतिक सौन्दर्यप्रति बेखबर छौँ । र, सुन्दरताको मापन वस्त्र र गरगहनाबाट गर्न तल्लीन छौं । अर्थात महिलालाई माल बनाउने पुँजीवादको अभियानका इमान्दार अभियन्ता छौं हामी ।
१४ लाख भारतीय रकमसहित एक पक्राउ
February 16, 2020 epradesh
रासायनिक बिषादी, बिष कि औषधि ?